BurmeseBible: ဘေးဒါဏ်ကြီးများ Famine and Disasters
ဘေးဒါဏ်ကြီးများ Famine and Disasters
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တုန်းက ဆရာအောင်နိုင်ဆီကို မိတ်ဆွေတစ်ဦးက မြေငလျှင်လှုပ်ခြင်း၊ လေမုန်တိုင်းဒါဏ်များ သမိုင်းကို ရေးပို့ပေးပါတယ်။ တော်တော်လေးသေကြေခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း မကြုံစဖူး နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးကြောင့် သိန်းချီပြီးလူတွေ သေကြေခဲ့ကြပါတယ်။ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၁ ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြုစာစောင်မှာ ဆရာကြီးဦးတင်မောင်ထွန်းက မိုးခေါင်းရေငတ်တာ မြန်မာပြည်မှာမကြားဖူးတဲ့ကိစ္စ ဇွန်၂၀၁၀ မှာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရေတွင်း၊ ရေကန်တွေ ရေခန်းကုန်တယ်။
> OTHER HISTORICAL disasters:
> China earthquake 26 July 1976 ( 255,000 dead )
> Portugal earthquake 26 Jan 1951 ( 30,000 dead )
> Kansu, China earthquake 26 Dec 1932 ( 70,000 dead )
> Myanmar Nargis, Storm May 2008 (200,000 dead)
မိုးခေါင်းရေငတ်တာ အငတ်ဘေးဆိုတာ မြန်မာပြည်သမိုင်းမှာ မကြားဖူးသေးပါဘူး။ ငတ်လို့သေတဲ့ မသာ မြန်မာပြည်မှာ မရှိသေးဖူး ပြောစကားရှိသော်လည်း တစ်ယောက်တစ်လေရှိနေပြီပြောပါတယ်။ အငတ်ဘေးဆိုတာ မိုးခေါင်ရေရှား၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး တနှစ်မက ဖြစ်တာကြောင့် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဖြစ်တာပါ။ အထက်က ရေကြီး၊ မုန်တိုင်း၊ မြေငလျှင်၊ စစ်ဖြစ်လို့ သေကြေတာတွေထက် အဆပေါင်းများစွာဆိုးဝါးပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း တရုပ်ကွန်မြူနစ်ခေတ်က ကမ္ဘာနဲ့အဆက်ဖြတ်ပြီး မိုးခေါင်ရေရှားမှု Farmine ကြောင့် သန်းပေါင်း၆၀ကျော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အာဖရိကမှာတော့ အငတ်ဘေးဆိုတာ သိပ်မထူးဆန်းလှပါ။ သန်းနဲ့ချီပြီးသေကြပါတယ်။ ရောဂါဘယကြောင့် သေဆုံးရတာကလည်း ကြောက်မက်ဖွယ်ပါ။ ကျောက်ရောဂါကြောင့် ဥရောပတိုက်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၁၅၀မှာ လူသန်းပေါင်း ၆၀၀ သေကြတယ်။ အံ့သြစရာပဲ။ ပလိပ်ရောဂါကြောင့်လဲ သန်းနဲ့ချီသေဆုံးကြတယ်။
1. Famine is the most people died (~1920-1960, millions people died under communist rule in China, Soviet..etc.. No.1 in Chinese communist - 45millions Chinese died.
2. Myanmar Nargis cyclone is No.6 (126,000 people died)
3. Small pox - last 150 years ago, 600 millions people died. (believe it or not)
4. Some disease (Flu, Plague...also Big disasters)
ငတ်ပြတ်ပြီး သေတယ်ဆိုတာ အသေဆိုးကြီးတစ်ခုပါ။ ယေသပ်ကတော့ အီဂျစ်ဘုရင်ရဲ့ ၇နှစ်အငတ်ဘေးကနေ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယဘုရင်ခံအဖြစ် သမ္မာကျမ်းစာမှာ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သားများ အငတ်ဘေးမှ မကြုံရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွှမ်းပါတယ်။ နာမတော်ဖြင့် ဆက်လက်ဆုတောင်းကြပါစို့...။
Posted by Witmone at 5:15 AM